မက်စထရိုကိုဘယ်အချိန်မှာ Mersin ရမလဲ Mersin Metro Lines ဘယ်မှာဖြတ်မည်နည်း - RayHaber
Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး33 Mersinဘယ်အချိန်မှာ Mersin မှမြေအောက်အရာ? Mersin မီထရိုလိုင်းမလွန်ကြမည်နည်း
04 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Maps, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
Metro ယခု Mersin ရှိဟုနေကြသည် Izmir, တူရကီရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအပေါ်အရေးအပါဆုံးတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခါမြေအောက်ရထား Mersin အတွက်အလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း ပါလီမန်စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် AK ပါတီ Mersin လက်ထောက် Lutfi Elvan "ဟုအဆိုပါ Mersin မက်ထရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ငါကသမ္မတဦးသိန်းစိန် Mersin ပူးတွဲတန်ဖိုးကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "သူကသူ့ကြေညာချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီတော့ရှိရာမက်ထရို Mersin တှငျကငျြးပခဲ့ကွမညျနညျး Mersin မြေအောက်ရထားလိုင်းများအနေဖြင့်လွန်သွားကြလိမ့်မည်နည်း Metro Mersin အခါအဆုံးသတ်ကြမည်နည်း
Mersin အရာအားလုံး Lutfi Elvan ထုတ်လွှင်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးရှိမည်ဟုသူကဆိုသည်: "Mersin ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအားလုံးသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် Mersin အနိုင်ရအဖြစ်။ Mersin ဤတောင်းဆိုမှုကိုကိုဖန်ဆင်းသောအခါကျနော်တို့ကိုစဉ်းစားမိတယ်ဘယ်တော့မှ Mersin မြေအောက်ရထား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုယူပြီးအပေါ်အသွားအလာပေးနေတာဖို့အရေးပါတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့လိုအပ်သောအစပျိုးစေပြီ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတမစ္စတာ Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူ Mersin နှင့် Mersin အများကြီး likes ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတကျွန်တော်တို့ကို Mersin မြေအောက်ရထား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုယူပြီးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောထောက်ပံ့မှုကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ သူ Mersin မက်ထရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ငါကသမ္မတဦးသိန်းစိန် Mersin ပူးတွဲတန်ဖိုးကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
Mersin Metro နေရာ BE သနည်း
ပထမဦးဆုံးနှင့်သာမက်ထရိုဖြစ်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးဖြစ်သော Mersin အတွက်အတော်များများကဒေသများ, မသာခေတ်မီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဧရိယာအဖြစ်တစ်ခုမြို့ပြလူနေမှုအာကာသအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ကားဥယျာဉ်ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်လုံခြုံယာဉ်ရပ်နားနေဖြင့်တိုင်းပြည်နှင့်အဓိကဘူတာရုံစက်ဘီးရှိလူတစ်ဦးမူဝါဒကလက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်လွှဲပြောင်း, သူတို့ကမက်ထရိုမြို့ကြီးများရဲ့နှစ်သိမ့်အတွက်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာသူတို့သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့စနစ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပေါင်းစည်းမှုဖွတစ်ခုကိုတူရကီအတွင်းပထမဆုံးမြေအောက်ရထားစနစ်ကဖွစျလိမျ့မညျ
Mersin ၏ Metro Properties NE?
ဒါဟာပိုလုံခြုံစိတ်ချ, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်မြေအောက်ရထားအမြန် access ကိုခွင့်ပြုနှင့် Mersin လူတို့နှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးခံရဖို့စီစဉ်ထားသည်၏ဆောက်လုပ်ရေးပြီးသွားမှအမြန်ဆုံးလမ်းမူဝါဒလက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်နောက်တဖန်, စီမံကိန်းအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုနှင့်အတူ Single-ပြွန်စနစ်ဖြင့် 10 မီတာတစ်ဦးပြင်အချင်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်။
နည်းပညာမြေအောက်တပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည်သည့်စမတ်မြို့,7ထံမှ 70 ဖို့အားလုံးကိုကွင်းဖြေရှင်းရန်အပြည့်အဝ automated စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစနစ်, အဆင်ပြေကားများ, အထူးအလင်းရောင်နှင့်အများပြည်သူလိပ်စာစနစ်, နောက်ဆုံးပေါ်စနစ်ကသတင်းအချက်အလက်ပျဉ်ပြား, နောက်ဆုံးပေါ်စနစ်ကစက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကားဒီဇိုင်းအားဖြင့် image ကိုကြော်ငြာစနစ်ကရွေ့လျား, ဒါဟာရည်ရွယ်သည်။
WHEN တွင် Metro Mersin ဘာဖြစ်သွားမလဲ
Metro 1 ။ မြို့တော်ရဲ့အဓိကအရှေ့အနောက်အသွားအလာဟက်အများပြည်သူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ကိုပထမဦးဆုံးလမ်းအတွက်။ 102ယခုနှစ်အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ လိုင်း, တက္ကသိုလ်များအကြား Pozcu မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ရှည်လျားဘူတာရုံ 10,5 8 ကီလိုမီတာ၏အမျိုးအစားထဲမှာမှအလင်းရထားလမ်းဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 20232စဉ်းစားနှစ်တွင်အများပြည်သူထံပေးအပ်သည်။ လိုင်းကုန်ကျစရိတ်, 400 သန်းနှုန်းအဖြစ်ဒီနေ့ပိုက်ဆံတန်ဖိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်။ မီးရထားဘူတာရုံ, အရှည်ဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့် City ဆေးရုံ 12 ကီလိုမီတာနှင့် 123ပါဝင်သည်ဟုမြေအောက်ဘူတာရုံချိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်းများတနှစ်တွင် 2024 အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်ထင်နေကြသည်။
Mersin မြေအောက်ရထားလိုင်းများနေရာ BE မလဲ
ဘူတာနှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်တို့အကြား xnumx.hat ကီလိုမီတာ4နှင့် 5,5 ဘူတာရုံထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်းအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်စဉ်းစားသည်တိုင်အောင်အကမ်းခြေပေါ်သွားလိမ့်မည်သည့်လမ်းရထား၏6။ ဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့်အတူချိတ်ဆက် 2025 ကီလိုမီတာရှည်လျား 8 8 ဘူတာရုံပါဝင်ပါသည်လိမ့်မယ် pose ။ အဆိုပါလိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြေအောက်ရှိလိမ့်မည်။ Mersin ယခုနှစ်5စီမံကိန်းအတွက်ရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
အဆိုပါဆိပ်ကမ်း, မြောက်ဘက်နှင့်အတူချိတ်ဆက် 11 ကီလိုမီတာနှင့် 126ဘူတာရုံပါဝင်ပါသည်လိမ့်မယ်ရှိုး။ အဆိုပါလိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမြေအောက်ဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်သည်။ ဒီမျဉ်း Mersin 2029 ၏ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသည်။
Mersin မြေအောက်ရထားသည့် MAP
ကမ္ဘာကြီးကို Pedalla နှင့်အတူ Mersin မှ Mersin ၏ '' ခရီးစဉ် 18 / 01 / 2018 အဆိုပါ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ယခုနှစ်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးခရီးစဉ် Mersin ၏xnumx'üncü '' ခရီးစဉ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသည်အစည်းအဝေး၏ Mersin ခရီးစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ Hasan Gökbel၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာအောက်မှာစဉ် Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကွပ်မျက် Mersin လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဦးစီးဌာန Manager ကိုအလီ Osman ကလေး, ပြည်နယ်အမျိုးသားပညာရေးဌာနခွဲ Manager ကို Behzat တင်းကျပ်, အားကစားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာနခွဲ Manager ၏ Mersin ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေ့ဆုံသည်အားကစားဆောင်မှုများဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး, Mersin မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်လုပ် လက်ထောက် Remzi Ozer, ဒေသဆိုင်ရာဒုတိယသမ္မတအလီ Adalioglu, TRT သတင်းများဒါရိုက်တာ Hasan လျှို့ဝှက်အပေါင်းတို့, Mersin တွေကတော့ရွာတွေကို၏တူရကီအားကစားစာရေးဆရာအသင်းက ...
Mersin အတွက်လုပ်ဖို့ Mersin စိတ်အားထက်သန်စခန်း၏ '' ခရီးစဉ် 28 / 11 / 2018 Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်4နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်အောင်မြင်စွာထွက်သယ်ဆောင် Mersin Mersin ၏အဆိုပါခရီးစဉ်၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်သိတငျးကိုကျေးဇူးတင်, ပြည်ပမှာအနေဖြင့်စက်ဘီးစီးအဖွဲ့တပ်အဘို့ရှေးခယျြမှုတစ်မြို့ဖြစ်လာသည်။ Mersin ဧကန်အမှန် Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏အားကစားမြို့အောင်ဆီသို့ဦးတည်ချီတက်လာ, အဲဒါကိုလုပ်ဆောင်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ၏အသီးအပွအသီးအနှံကိုရိတ်ရတော့တယ်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်းပြည်ပမှာ Mersin Mersin ၏မြို့ကိုကျေးဇူးတင်သည်နှင့်ဧပြီလများတွင်တပ်သို့လာသောစက်ဘီးစီးအဖွဲ့၏ tour ။ ကြိုတင်လိုဗေးနီးယား, ဂျာမနီ, မှ Mersin Mersin အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးခရီးစဉ်၏ပြက္ခဒိန် '' ခရီးစဉ်အတွက်တည်ရှိပြီးဧပြီလနှင့် UCI အကြားအရပ်ဌာနကိုယူလတံ့သောဤနှစ်တွင် 25-28 2019 ရက်စွဲ, (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်) ...
Bursa-မြန်နှုန်းကနေရထားလမ်းကြောင်းလွန်သွားပါလိမ့်မယ် 23 / 02 / 2016 Bursa-မြန်နှုန်းရထားလမ်းကြောင်းတည်နေရာလွန်သွားပါလိမ့်မယ်: Bursa-မြန်နှုန်းရထားလိုင်းသင်သည် mezit ကနေရလိမ့်မယ်, Oh ငါ့နောက်သို့တောင်ကြီးတောင်ငယ်များ၏အနာဂတ်, တကယ် ... သူတို့ကဒီစာမျက်နှာ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစာဖတ်သူများသိကြ၏။ အခြေခံအားဖြင့် Balat ဒီဇင်ဘာလ 2012 အတွက်လမ်းကြောင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေနဲ့အမှားစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ထံမှပစ်ချ, သောကြောင့်, delete, start အသစ်သောစီမံကိန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှုအတွက်ဇန်နဝါရီလ32016 နေ့ရက်ကာလ၌သူတို့ဖတ်ရွှေ့။ ထိုအခါ ... ငါတို့Karaloğlu'naရဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ရပ်အတွက်အဖက်ဖက်မှဧည့်သည်များရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကနေ Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Munir ဖေဖော်ဝါရီလ 16 2016 ရက်တည်နေရာကိုငါပေးပြီ။ ကျနော်တို့ကအမှိုက်စရပ်သို့ ဝင်. ဒါ Yenisehir-Bilecik တည်ဆဲစီမံကိန်းများအကြား " ... ပင်အကြီးအကျယ်အပြတ်အသတ်ရှင်းပြ၌ဤအချက်မှာ။ လောလောဆယ်, တဖန်, ခြစ်ရာကနေ ...
ချက်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Baby: 'ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစေမယ့်အဝေးပြေးလမ်းမနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား' '
ကမ္ဘာကြီးကို Pedalla နှင့်အတူ Mersin မှ Mersin ၏ '' ခရီးစဉ်
Mersin အတွက်လုပ်ဖို့ Mersin စိတ်အားထက်သန်စခန်း၏ '' ခရီးစဉ်
Bursa လမ်းရထားဘူတာရုံမြေပေါ်နိုင်ငံသားတွေကို select လုပ်ပါလိမ့်မည်
ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်း 25 2014 နေ့စွဲလှုပ်ရှားမှုများမှEskişehirမှနယူးလမ်းရထားလိုင်းကို